Kandida filoha Misy ireo mbola mivoaka any ivelany
Manararaotra maka toky faramparany any ivelany ireo kandidà hisedra safidim-bahoaka amin`izao fotoana.
Raha ny fantatra, lasa any andafin`ny riaka i Andry Nirina Rajoelina. Mbola any rahateo ny kandidà sasany toa an’i Fanirisoa Ernaivo. Hanaraka ny dian`izy ireo ihany koa i Jean Max Rakotomamonjy. Misy moa no efa tonga eto an-toerana tamin`ny faran`ny herinandro lasa teo, dia i Serge Imbeh. Tsy atao mahagaga izany satria ireo mpamatsy vola eto an-toerana dia mialokaloka any ivelan’ny ranomasina ankehitriny. Eo anatrehan’ny olana ara-bola miseho eo amin’ny fitondram-panjakana, dia ny tsy fisian’ny vola avy amin’ireo mpamatsy vola mahazatra noho ny fanapahan-kevitr’izy ireo hampihantona aloha ny famatsiam-bola an’i Madagasikara, hany ka miakatra io ny devizy matanjaka (euro sy dollar), ary mitotongana be ny sandan’ny ariary. Izany hoe tsy mahatoky ny fitondrana sy ny zava-kitranga aoriana ireo mpamatsy vola mahazatra eto an-toerana noho ny tsy fisian`ny fahatomombanana eo amin`ny fikarakarana fifidianana. Hiakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara satria ny fitotongan’ny vola malagasy miohatra amin’ireo “devises” ireo no antony iray lehibe indrindra mampahantra an’i Madagasikara. Efa hita taratra sahady ny fahadisoam-panantenana ho an’ireo kandida sasantsasany tsy hanam-po ny tena safidim-bahoaka rehefa mivoaka ny voka-pifidianana satria mitaky fomba fanaovana politika vaovao ny Malagasy. Manoloana izany, tokony homena lanja ny fifidianana, izay hiompanan’ny ain-dehiben`ny firenena ny vokatry ny safidim-bahoaka.